Wasiirka arrimaha dibeda Jabuuti : Ma jirto booqasho madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ku tagayo Eritrea. – Xeernews24
Wasiirka arrimaha dibeda Jabuuti : Ma jirto booqasho madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ku tagayo Eritrea.
1. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibeda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo Qoraal kooban soo dhigay boggiisa Twitter-ka ayaa wax-ba kama jiraan ku tilmaamay warar soo baxayay oo sheegaya in madaxweynaha Jabuuti booqanayo dhawaan dalka Eritrea.
Wasiirka ayaa ku tilmaamay wararka ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta kuwo aan waxba ka jirin, oo sal iyo raadtoona lahayn isaga oo intaa ku daray in wali aan xal laga gaadhin sidda uu hadalka u dhigay qalalaasihii dhinaca xadduuda ee labada dowladdood Jabuuti iyo Ertirea sidda dardeetna ay suurtagaal ahayn wakhtigan in la booqdo wadan dhulkaaga qayb ka mid ah haysta.
Hadalka Wasiirka ayaa imanaya kaddib markii qaar ka mid ah warbaahinta lagu daabacay warar sheegaya in dhawaan magaalada Asmara uu tagi doono madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Dowladda Jabuuti ayaa dhawaan ka cosatay Qaramada Midoobey in la xaliyo khilaafka dhinaca xudduuda ah ee kala dhaxeeya dalka Eritrea.
Ertiea iyo Itoobiya ayaa iyagu soo afjaray colaad ka badan 20 sano soo soctay, waxaana hadda muuqata in xukuumada Asmara mar kale dib u soo ceshan doonto maqaamkeedii ay ku laheyd qaarada Afkrika iyo guud ahaanba caalam-ka intiisa.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/07/31.jpg 640 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-01 12:08:452018-08-01 12:08:45Wasiirka arrimaha dibeda Jabuuti : Ma jirto booqasho madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ku tagayo Eritrea.
Soomaaliwaynay soo dhawaadda Dr.Aby Ahmed oo Kalimaad Af Soomaali ah ku waabsaday dad uu qodbaynaaye